Gudomiyaha Xisbiga Midnimada iyo Cadaalada Shacabka Xaq ayay u leeyihiin in ay Dibad baxyo dhigtaan. – Kismaayo24 News Agency
Gudomiyaha Xisbiga Midnimada iyo Cadaalada Shacabka Xaq ayay u leeyihiin in ay Dibad baxyo dhigtaan.
by admin 18th April 2019 18th April 2019 030
Gudoomiyaha Xisbiga Midnimada iyo Cadaalada Cabdulqaadir Diiriye Faarax ayaa difaacay in dadka Muqdisho ay sameeyaan isku soo bax nabadeed oo ay ku muujinayaan dareenkooda, isagoo si kulul u weeraray sida dowladda u dooneyso inay u hor-istaagto dareenka shacabka.
Cabdulqaadir Diiriye Faarax ayaa sheegay inay xaq dastuuri ah ay tahay in muwaadinka Soomaaliyeed in dareenkooda ku cabiraan isku soo bax nabadeed, isagoo xusay in aan cidna looga heebeysaneyn.
“Waa xaq Dastuuri ah in muwaadinka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa Muqdisho ay dareenkooda isku soo bax nabadeed ku cabiraan, mana jirto cid ay kaga heebaysanayaan, magac Diin, siyaasad iyo dhaqan midkii ay doonaan ha sitaan”ayuu yiri Cabdulqaadir Diiriye Faarax.
Cabdulqaadir Diiriye Faarax ayaa soo hadal qaaday dad isugu jira siyaasiyiin, odayaal iyo culimo oo warbaahinta ka hadlayay, kuwaasoo ka digayay banaan baxyada, waxaana uu ku tilmaamay dadkaas in aysan marna ka damqan dhibaatada loo geysto xoogsatada soomaaliyeed ee xaqdarada lagu dilay.
Xog: Madaxda Maamul Goboleedyada oo Shir uga furmay.
Dhageyso: Geedi Qaraxyada Muqdisho Al Shabaab kama danbeeyaan.
Alshabaab” Galkacyo waxaan ku dilay nabad-doon u ol oleeyay duulaankii ciidanka puntland ay ku qaadeen…..”
Tifaftiraha K24 28th April 2017
Baardheere oo ay ka dhacdey arin shabaab ka nixisey dowladana ka farxisey (Maxay tahay arintaasi??)
admin 17th August 2015 27th August 2015